Momba anay - Mestech Industrial Limited
Mpanamboatra bobongolo sy mpamatsy vahaolana, Sina
Mestech dia natsangana tamin'ny taona 2009, any Shenzhen, ivon-toeram-pamokarana indostrialy any atsimon'i Sina. Mestech dia manolo-tena amin'ny famolavolana bobongolo sy ny lasitra plastika. Ankehitriny dia manitatra ny serivisinay amin'ny famolavolana vokatra izahay, fanariana vy maty, fametahana sy fametahana milina. Izahay koa manome ny mpanjifa amin'ny serivisy hijanona tokana avy amin'ny faritra hatramin'ny fivoriam-bokatra vita.
Ny faritra plastika sy ny vy ary ny vokatra vokarinay dia mitahiry sehatra maro, anisan'izany ny indostrialy, fitsaboana, elektronika, herinaratra, herinaratra, kojakoja mandeha ho azy, kojakoja ao an-trano ary vokatra ho an'ny mpanjifa. Mihoatra lavitra ny zavatra andrasan'ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanomezan-danja ny mpiara-miasa rehetra sy ny famoronana kolontsaina izay misy ny fanatsarana, ny famokarana mahia ary ny fiaraha-miasa amin'ny famatsiana mba hanomezana lanja ny mpanjifanay.
Hatramin'ny niorenany, Mestech dia nanolo-tena hanome ny mpanjifa vokatra sy serivisy avo lenta sy avo lenta. Manana ekipa matihanina momba ny injeniera izahay, milina ampy fitaovana sy rafitra fitantanana mahomby. Mampihatra teknolojia sy fomba fitantanana vaovao tsy tapaka izahay mba hanangonana traikefa amin'ny famokarana lasitra plastika, famokarana tsindrona, famonoana vy, famolavolana vokatra ary fivorian'ny vokatra hamaly ny filan'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny hery mitarika dia hita taratra amin'ireto lafiny manaraka ireto:
Ekipa injeniera anay
Ireo injenieranay dia manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy ny famokarana fizarana plastika, faritra vy ary bobongolo. Mampiasa rindrambaiko izy ireo handrafetana lasitra sy vokatra. Izy ireo dia afaka manome ny mpanjifa famolavolana vokatra, famakafakana azo atao, fanombanana loza ary vahaolana.
Ireo injeniera Mestech dia afaka mampiasa tsara ny UG, PROE, Moldflow ary rindrambaiko hafa ho an'ny famolavolana sy famakafakana bobongolo. Ny lasitra ataontsika manarona faritra, fiara, fitaovana fitsaboana, kojakoja elektronika, kojakojan-tokantrano, herinaratra indostrialy, fiarovana ny tontolo iainana ary kojakoja ilaina isan'andro. Afaka mamolavola sy manamboatra lasitra manara-penitra HASCO sy DEM izahay araka ny fepetra takian'ny mpanjifa, ary manondrana azy ireo any amin'ny firenena sy faritra hafa.
Ireo injeniera Mestech dia afaka miara-miasa amin'ny mpanjifa hanome endrika endrika plastika sy famolavolana vy amin'ny vokatra elektronika sy vokatra elektrika, ary manao fanadihadiana azo atao, mifanakalo hevitra sy mahita olana ary manome sosokevitra fanatsarana, ary koa ny famolavolana bobongolo sy ny famokarana amin'ireto dingana manaraka ireto.
Manana ekipa injeniera izahay, manao ny famolavolana ny vokatra sy ny famolavolana bobongolo ary ny fanaraha-maso ny tetikasa. Raha manana tetikasa vaovao eo am-pelatananao mila manamboatra lasitra plastika sy faritra vita amin'ny tsindrona ianao, azafady mifandraisa amin'ny ekipa teknika, handinika ny angon-drakitrao izahay ary handefa sosokevitra vitsivitsy hanatsarana ny volavolanao, izany dia ho azo antoka fa ho mahomby mandritra ny famokarana bobongolo ary mamonjy fotoana betsaka amin'ny fanaovana lasitra.
Ny orinasa sy ny fitaovana
Ny bobongolo sy ny famolahana tsindrona ary ny fanariana vy maty dia miankina betsaka amin'ny haavon'ny fitaovana.
Ao amin'ny atrikasa bobongolo, ankoatry ny injenieran'ny famolavolana matihanina, ny injenieran'ny processeur ary ny master mould, ny orinasanay dia mazoto manaraka ny haitao mandroso ankehitriny, manana fitaovana milina CNC mandroso, milina famolavola EDM, fitaovana milina fanapahana tariby. Ny hafainganam-pandehan'ilay fitaovana milina haingam-pandeha dia mety hahatratra 24000rpm.
Ho fanampin'ireo karazana bobongolo ankapobeny, dia manao lasitra fanindronana miloko roa koa izahay, mametraka bobongolo labiera ary mampiditra bobongolo, manasongadina bobongolo ary manao bobongolo lehibe ao anatin'ny 3 metatra.
Atrikasa fampidirana tsindrona
Mikasika ny famolavolana tsindrona dia manana milina fanorohana tsindrona isika manomboka amin'ny 100 taonina ka hatramin'ny 2000 taonina, milina fanorohana tsindrona miloko roa ary milina fanoratana tsindrona haingam-pandeha. Ho fanampin'ny famolavolana tsindrona amin'ny ampahany plastika amin'ny habeny, afaka mamokatra faritra roa loko izahay, faritra misy rindrina manify ary faritra lehibe. Ny faritra vita amin'ny bobongolo dia mety hahatratra 1,5 metatra ny halavany ary ny hatevin'ny ampahany manify indrindra dia mety 0,50 mm
Manana milina fanindronana 32 isika izay misy ny herin'ny clamping manarona 90T ~ 2000T, milina fanindronana indroa, miaraka amin'ireo mpiasa 50 ~ 60. Vokatra famokarana 1,5 tapitrisa isam-bolana.
Atrikasa famelomana maty
Eo amin'ny sehatry ny fananganana metaly dia azontsika atao ny manome ny famokarana die firaka ny firaka zinc sy ny firaka aliminioma, ary koa ny famolavolana ny ampahany amin'ny metaly sasany. (azafady mba jereo ny pejy "metal die casting" sy "machining CNC" raha mila tsipiriany.)
Mampahafantatra ny fitantanana ny tetikasa sy ny rafitra ERP izahay amin'ny famokarana sy ny famokarana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, manamboatra fotoana izahay ary manatsara ny fizotrany manomboka amin'ny famolavolana, ny fividianana fitaovana ho amin'ny fanodinana, ny famokarana, ny fizahana ary ny fandefasana, mba hanafohezana ny vanim-potoana fananganana sy hampihenana ny vidin'ny lasitrao sy ny famokarana.
Ny kalitao dia toetra lehibe iray hiantohana ny fiasan'ny vokatra. Nametraka rafitra kalitao tonga lafatra izahay ary namolavola ny fizotrany sy ny fenitra momba ny kalitao mba hahazoana antoka fa ny vokatra novokarina dia mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, ary miantoka ny vokatra azo avy amin'ny vokatra mendrika ho an'ny mpanjifa. Ampidiro
Ao amin'ny dingana famokarana bobongolo, dia mazoto mijery ny kalitao hatramin'ny famolavolana bobongolo
1. Fanadihadiana momba ny fitakian'ny mpanjifa
2. Famerenana ny mety amin'ny famolavolana lasitra
3. Volavola fitsapana bobongolo
4. Fanamafisana ny famolavolana farany
5. Fanaraha-maso miditra amin'ny vy bobongolo
6. Fatra refy ny masinina
7. Fandrefesana ny haben'ny electrode fandefasana
8. Fitsapana sy fanombanana ny bobongolo
9. Fanombanana ny famokarana andrana
Amin'ny dingana famokarana
1. Fanamafisana ny ampahany miavaka sy ny santionany amin'ny famokarana
2. Famokarana faobe ny fizahana lahatsoratra voalohany
3. Fanaraha-maso ny famokarana
4. Fanaraha-maso feno sy fizahana toerana amin'ny fandefasana
5. Fanarahana kalitao
Manana ekipa QC izahay, ary fitaovana fitiliana sy fandrefesana: milina fandrefesana 3D mandrindra sy mpandidy loko.
Ekipa mpivarotra manondrana matihanina
Miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka avy amin'ny firenena maro mandritra ny taona maro i Mestech, manamboatra lasitra sy vokatra mahazatra ho azy ireo izahay, ary koa serivisy tokana. Niaina ekipa matihanina amin'ny varotra ivelany izahay. Mahafantatra ny haitao amin'ny vokatra izy ireo ary afaka miresaka momba ny famolavolana, ny fizotrany, ny raharahany ary ny entana amin'ny entana amin'ny teny anglisy. Azon'izy ireo tsara ny takinao ary manome anao vokatra sy serivisy ara-potoana sy marina.